Wararkii u dambeeyay Diyaaradii lacagta faraha badan u siday Imaaraadka oo la fasaxay iyo warar kale oo khilaafsan. – Xeernews24
Wararkii u dambeeyay Diyaaradii lacagta faraha badan u siday Imaaraadka oo la fasaxay iyo warar kale oo khilaafsan.
8. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar goor dhow na soo gaadhay ayaa sheegaya in diyaaradii lacagta faraha badan u siday ee u socotay Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho la fasaxay, iyadoo ay dejisay shixnad lacageed oo ay siday.
Diyaaradda siday shixnada lacageed ayaa waxaa la socday Ciidamo Imaaraadka Carabta ka tirsan oo gaadhayay illaa 30 askari, waxaa wararka qaar sheegayaan in lacagta ay siday ay gaadheysay illaa 13 milyan oo doollaar.
Wararka ayaa sheegaya in Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ay soo farageliyeen muran ka dhashay in la baadho shixnada, iyadoo diblomaasiyiinta Imaaraadka Carabta ka socotay ee lacagta ku sugayay garoonka ay ku doodeen inay leeyihiin xasaanad diblomaasiyad.
Ilo ku dhow dhow garoonka lacagta laga gelbiyay garoonka, isla markaana gawaadhi fara badan oo kuwa aan xabadaha karin lagu qaaday, waxaana wararku sheegayaan in loo qaaday xarunta Nabadsugida, si loogu baadho, iyadoo lagu wado in lagu wareejiyo Safaaradda Imaaraadka Carabta.
Lacagta ay siday diyaaraddan ayaa qeyb ka mid ah ay ku socotaa maamulka Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, waxaa loogu tala galay Ciidamada ay tababareen Imaaraadka Carabta ee ah ciidamada badda Puntland ee loo yaqaano PMBF.
Warar kalo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya diyaaradii lacagta siday ee lagu qabtay Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho,iyadoo horay u soo baxeen warar sheegaya in la gartay diyaaradda ka dibna la fasaxay ayaa hadana warar kale oo aan helay waxay sheegayaan in lacagta loo gudbiyay Bangiga dhexe.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku sugan garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho, saraakiil ka tirsan nabad-sugidda Soomaaliya ayaa la wareegtay lacag $9 Milyan ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/diyarad.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-08 18:01:162018-04-08 18:01:16Wararkii u dambeeyay Diyaaradii lacagta faraha badan u siday Imaaraadka oo la fasaxay iyo warar kale oo khilaafsan.
Daawo Sawirro) Qaabka ciidanka Soomaalida loogu tababaro saldhiga Milateri ee... Kulanka Baarlamaanka ee saaka oo dib u dhac ku yimid iyo wada hadalo dib u ...